Qaraxii Afaraad iyo Shanaad oo ka dhacay Muqdisho Xildhibaano iyo Askar lagu dilay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Qaraxii Afaraad iyo Shanaad oo ka dhacay Muqdisho Xildhibaano iyo Askar ...
Qaraxii Afaraad iyo Shanaad oo ka dhacay Muqdisho Xildhibaano iyo Askar lagu dilay
Beegsonews – Askari ka tirsan Ciidanka dowladda ayaa ku geeriyootay Qarax Miino oo maanta ka dhacay Jidka Warshaddaha ee Muqdisho.
Qaraxaan ayaa la geliyay goob ay fadhiistaan ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan Ciidanka Booliska oo ku taalla Warshaddaha gaar ahaan Eveco.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 Askari oo Ciidanka dowladda ka tirsan ay ku geeriyoodeen Qaraxaasi.
Qarax kale ayaa la sheegaya inuu ka dhacey muqdisho isgoyska
Wararka ka imanaya Isgooyska Ex-Koontarool Afgooye ayaa sheegaya in uu halkaas ka dhacay Qarax lagu xiray Gaari ay la socdeen dad rayid ah.
Inta la xaqiijiyay 2 Qof oo Rayid ah ayaa dhintay halka Xildhibaan Salaad Sheekh Xuseen, oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle uu ku dhaawacmay qaraxa.
Gaari ay la socdeen ayaa la sheegay in uu qarxay,waxaana qof ka mid ah dadka ehelka la ah dadka ay waxyeellada soo gaartay xaqiijiyay dhimashada laba qof iyo dhaawac qof kale.
Qaraxan waxaa uu ku soo beegmay iyada oo Wasaaradda Shaqada iyo shaqaalaha iyo Wasaaradda Howlgala guud uu ka socdo dagaal u dhaxeeya AL-shabaab iyo Ciidamada dowladda.
Waa Qaraxii Shanaad oo ka dhacay Muqdisho Maanta oo Sabti ah, Labadii Qarax ee ugu horeysay ayaa ahaa kuwa ka dhacay Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha oo ay ka dhex dagalaamayaan Kooxo ka tirsan Al-Shabaab.
Qaraxii Sedexaad ayaa ka dhacay meel u dhow Masaajidka Biyamaalow oo u dhow Isgoyska Howl-Wadaag, wuxuuna ahaa qarax dhulka lagu aasay.
Qaraxa Afaraad ayaa ka dhacay Wadada Warshadaha ee Magaalada Mudisho, wuxuuna ahaa Qarax lagu aasay Bar Koontarool oo ay Ciidamada Booliska ku lahaayeen agagaarka Xarunta Eveco oo ku taal Jidka Warshadaha.
Midkaan hadda ka dhacay Ex Control Afgooye ayaa noqonayo midkii Shanaad oo Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Jawiga Magaalada ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana xiran inta badan waddooyinka Magaalada Muqdisho.
Xughayaha Warfaafinta Xisbiga UCID oo soo Jeediyay In Maxkamadd la Saaro...